कोरोना युद्धभूमि छाडेर कता बहकिँदैछन् ट्रम्प? – Health Post Nepal
कोरोना युद्धभूमि छाडेर कता बहकिँदैछन् ट्रम्प?
२०७७ वैशाख २५ गते ८:१९
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कोरोना लडाईंमा अडकिएर बस्न चाहदैंनन्। राष्ट्रिय संकटको ‘युद्धकालीन’ नेतृत्वमा असहज महसुस गर्दै उनी अब राजनीतिक कार्यतालिकातर्फ लागेका छन्।
धेरै राज्यमा संक्रमण बढेको बढ्यै छ र गभर्नरहरु उनको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै जनताको ज्यान जोगाउन लागिपरेका छन्। ट्रम्प चाहिं वैज्ञानिकहरुले दिइरहेका चेतावनीलाई ध्यान दिइरहेका छैनन। वैज्ञानिकहरुका अनुसार अमेरिकामा यतिबेला मनलाग्दी ढंगले वन्देज खुलाउँदै जाने हो भने लाखौं मानिसको ज्यान जानसक्छ।
हवाइ्ट हाउसले मंगलबार प्रष्ट पारेको छ, अब उसको ध्यान महामारी व्यवस्थापनबाट अगाडि बढेर सामान्य दैनिकीमा पुनरागमनको सन्देश दिने एवम् ट्रम्पको दोस्रो राष्ट्रपतीय कार्यकालका लागि अभियान छेड्नेतर्फ केन्द्रित हुनेछ। अमेरिकामा राष्ट्रपतीय चुनाव आउन ६ महिनाभन्दा कम समय बाँकी छ र कोरोनाबाट मारिनेको संख्या पनि ७० हजार नाघिसकेको छ। र, ट्रम्प यतिबेला आफू र आफ्नो प्रशासनले महामारी नियन्त्रणमा गरेको गल्ति बाहिर नआओस् भन्ने चेष्टामा छन्।
उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले मे महिनाको अन्तिम साता हवाइ्टहाउस कोरोनाभाइरस टास्क फोर्स भंग गर्ने जानकारी दिइसकेका छन्। अधिकारीहरुका अनुसार डा. एन्थोनी फाउसी, डवोरा ब्रिक्सजस्ता सल्लाहकारहरु मात्र हवाइट्हाउस वोर्डमा बाँकी रहनेछन्। टास्कफोर्स भंग गर्ने निर्णयका पछाडिको मूल कारण हो विशेषज्ञहरुको वैज्ञानिक तर्क, जो ट्रम्पको अति आशावादी र लहडी धारणासँग मेल खाँदैन। जसले गर्दा जति जति महामारी लम्बिदै छ, ट्रम्पको लोकप्रियतामा त्यति नै धक्का परिरहेको छ।
टास्कफोर्स भंग गर्दा ट्रम्प प्रशासनको कोरोनामाथि विजय हात पार्ने प्राथमिकता छ छैन भन्ने प्रश्न उठ्ने नै भयो। यो महामारी अझै धेरै महिना चल्ने देखिंदैछ।
‘हामी अब अलिक फरक ढंगले हेर्नेछौं। यो सुरक्षित भएर खोल्दै जाने कुरा हो। अब शायद नयाँ समूहले काम गर्नेछ,’ ट्रम्पले सीएनएनका जीम एकोस्टासँग भने।
महामारी विशेषज्ञहरुले चाँडै बजार खोल्दा अकल्पनीय संख्यामा मानवीय क्षति हुने चेतावनी दिएका बेला ट्रम्पले चाहिं आफूलाई अब मानिसहरुको मृत्युले फरक नपार्ने बताइसकेका छन्। एवीसी न्युजले यही विषयमा प्रश्न गर्दा उनले भने–‘केही मानिस मर्लान, तर जे सुकै भए पनि हामी अपार्टमेन्ट वा घरभित्र कोच्चिएर बस्न मात्र सक्दैनौं।’
ट्रम्पले अमेरिकीहरुलाई सामाजिक दूरी कायम गर्न र हात धोइरहन आह्वान गरेका छन्। उनका अनुसार घरमै मात्र बसिरहने कुरा अब राष्ट्रिय स्वास्थ्यका लागि घातक हुनेछ।
ह्वाइटहाउसले भाइरससँगको युद्धलाई शिथिल पार्ने सुरसार गरिरहँदा महामारीको डढेंलो फैलिरहेको कनेक्टिकटजस्ता राज्यका गभर्नरहरु क्षुब्ध भएका छन्।
उनी हप्तौंपछि हवाइट्हाउसबाट निस्केर पहिलो सांकेतिक भ्रमणका रुपमा एरिजोना गएर बोले। उनी भन्दै थिए–‘हामीले हाम्रो देशलाई फेरि गतिमा हिंडाउनु छ। तपाईंलाई थाहा छ, मानिसहरु मरिरहेका पनि छन्। अब उपचारका हिसावले हेर्नुहुन्छ भने निराशा देखिएला। तर आत्महत्या पनि भइरहेको छ यहाँ। मानिसहरुले रोजगारी गुमाइरहेका छन्। यस्तो हुन दिनु हुन्न।’
ट्रम्पले कोरोनाभाइरस महामारी नियन्त्रणका विषयमा यसअघि पटक पटक गरेका पूर्वानुमान असफल भइसकेका छन्। जस्तो, उनले अप्रिल महिनाको इस्टर चाडअघि नै अमेरिका पूरै खोल्ने घोषणा गरे। तर अमेरिकामा त्यतिबेला दिनमै हजारभन्दा बढी मानिस मर्दै थिए।
यतिखेर टास्क फोर्सको महत्व नदेख्नुले विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा खराब संकटका कारण ट्रम्प कसरी विचलित भइरहेका छन् भन्ने पनि देखाउँछ। महामारीप्रतिको आफ्नो बुझाईले काम नगर्ने भएपछि उनले टास्कफोर्सका सदस्यसँगै बसेर गर्ने प्रेस व्रिफिङ पनि बन्द गरिसकेका छन्।
मानिस घरमै सीमित रहँदाका अर्थतन्त्रमाथिको प्रलयकारी असरबारे शायदै कसैले शंका गरेका होला। र, जेनतेन दैनिकी चलाउने उपायको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे पनि कोही अबुझ नहोला। साथै अधिकांश राज्य धमाधम खोलिइरहँदा विशेषज्ञहरुले आशंका गरेजस्तै नै संक्रमण बढेको बढ्दै हुने, मानिसहरु झन झन मर्ने भन्ने नै पनि नहोला
खासमा यतिबेला कोरोनाग्रस्त अमेरिकी समाजका आफ्नै खाले आवश्यकता छन्। तीन करोड अमेरिकीले जागिर गुमाएका छन्। तिनलाई राहत तत्काल दिइहाल्नुपर्ने छ। हवाइट्हाउसका आर्थिक सल्लाहकार केभिन हयासेतले मंगलबार सीएनएनसँग बताएअनुसार शुक्रबारसम्मको आकंडामा अमेरिकामा वेरोजगारी २५ प्रतिशत नाघ्न लागेको छ। सन् १९३० को आर्थिक मन्दीयताको सबैभन्दा खराब अवस्था हो यो।
यी सारा अवस्थामा मुलुकले ऐतिहासिक अनुपातको आर्थिक संकुचन र अभाव झेल्नुपरेको छ। यसले गर्दा कहिलेसम्म बन्दाबन्दी धानेर बस्नसकिन्छ भन्ने वहस सर्वत्र हुनु स्वभाविक हो। तर, ट्रम्पको ह्वाइटहाउसले बन्द खोल्नेतर्फ ठिक त्यही अन्धाधुन्ध र राजनीतिक धुव्रीकरणको बाटो समातेको छ, जुन वर्षको सुरुआतमा पनि देखिएको थियो, जतिबेला राष्ट्रपति यो समस्यालाई नै नकारिरहेका थिए।
अमेरिकी जनताले व्यहोरिरहेको जोखिम राष्ट्रपति र उनका डेमाक्र्याट प्रतिद्धन्द्धी जो वाइडनको राजनीतिक करिअरभन्दा धेरै गह्रौं छ। र, आसन्न चुनाव करीब तपसिलको विषयबराबर देखिन्छ। यस्तो बेला जथाभावी हिसावले बजार खोल्दा मुलुक झन् गहिरो आर्थिक संकटमा फस्छ। भाइरसले पनि झन् भयानक संक्रमणको अवसर पाउँछ, कम्तिमा भ्याक्सिन र प्रमाणित उपचार पद्धति हात नलागेसम्म।
ट्रम्प प्रशासनको कार्यशैलीको व्यापक आलोेचना भइरहेको छ। तर ट्रम्पले आफ्नो बचाउ गर्दै भन्दै आएको यति मात्र हो, उनले बेलैमा चीन यात्रा गर्नेहरुमाथि आगमन प्रतिवन्ध लगाए र अहिले भेन्टिलेटरको अभाव हुन दिएका छैनन्।
ह्वाइटहाउसले भाइरससँगको युद्धलाई शिथिल पार्ने सुरसार गरिरहँदा महामारीको डढेंलो फैलिरहेको कनेक्टिकटजस्ता राज्यका गभर्नरहरु क्षुब्ध भएका छन्। कस्तो अचम्म छ, राष्ट्रपति केही दिन अघि सार्वजनिक रुपमै अझै धेरै मानिस मर्ने आकंलन गर्दै थिए। लगत्तै टास्कफोर्स भंग गर्ने भन्दैछन्,’ कनेक्टिकटका गभर्नर नेड लामोन्टले भने, ‘यो त निरर्थक कुरा हो। हामीले अझै धेरै संघीय निर्देशन आवश्यक छ।’
सिएनएनमा प्रकाशित लेखकाे अनुवाद